बीपीलाई बुझ्ने आआफ्नै दृष्टि- विचार - कान्तिपुर समाचार
भाद्र २४, २०७६ कुलचन्द्र वाग्ले
नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जसरी बुझे पनि हुने बनाइएको छ । प्रायः मानिस अरूका विचारलाई आफूअनुकूल हेर्ने गर्छन्, आआफ्नै व्याख्यामा तौलिन्छन् । त्यस्तो व्याख्यामा सम्बन्धितकै विचार–अभिव्यक्तिलाई उल्टोसुल्टो पार्ने पनि गरिन्छ । सायद आयामिक विचार–व्यक्तित्वप्रति हुने यस्तै हो ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित सीके लालको ‘बीपीको मधेस दृष्टि’ लेखले एउटा बहस सतहमा ल्याएको छ । त्यसबारे केही भन्नुअघि, बीपीलाई आआफ्नै अनुकूलतामा बुझ्ने दृष्टिबारे लेखूँ ।
मेलमिलाप नीतिको हवाला दिएर कसैले उहाँलाई राजावादी साबित गर्न पूरा शक्ति लगाएका छन् । कोही गणतन्त्रलाई बीपीको चिन्तन र स्वीकृतिबाहिरको मान्दैनन् । राष्ट्रवाद र देशभक्तिबारे बीपीको चेत–चिन्तनलाई दरबारिया दूरबिनबाट हेर्ने पनि भए । राजनीतिमा अनेक लाञ्छना कथेर प्रहार गरिएका बीपीको लेखनीप्रति पनि त्यही अन्याय भयो । बीपीलाई व्यापक लाञ्छित गर्नमा पञ्च–कम्युनिस्ट गठबन्धन सक्रिय रह्यो । छिटफुट त्यो क्रम अद्यापि छ ।
सीके लालको लेखमा जे ‘द्वेष’ भन्न खोजिएको छ, पेटबोली त्यो भन्न वा बताउन तथ्यमा समर्थ छैन । उनकै शब्द सापटी लिएर, ‘सिल्ली सिजन’ मा बहसका लागि यो लेख प्रस्तुत गरिएको चाहिंँ स्विकार्न सकिन्छ । ‘समाचारबाहिर वैचारिकता बाँकी छ भन्ने देखाउन बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ’ लेख्ने उनले लेखमा मधेसबारे बीपीको होइन, आफूले गढेको कुरा बीपीको भनेर प्रक्षेपित गर्ने बुद्धिमत्ता प्रदर्शित गरेका हुन सक्छन् । त्यसमा प्रस्तुत दृष्टि लालनिर्मित हो ।
बीपीकै भनाइले पुष्टि हुने उदाहरण त्यसमा छैन । सीके लालले त्यस बखतको कालचेतनाका अग्रणीलाई वर्तमान मान्यताका आधारमा मूल्यांकन गर्न मिल्दैन भन्ने पनि स्विकारेका छन् । उनले उद्धृत गरेका बीपीको भनाइ ‘म पनि मधेशी हुँ’ लगायतले बीपीको मधेस दृष्टिलाई नकारात्मक पुष्टि गर्दैनन् । न्याय भए जस्तो पनि लाग्दैन ।
कमजोरी सच्याउने बीपीको जागरुकताको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका लेखकले ‘निरन्तर सच्चिने प्रयत्न ऐतिहासिक रूपले महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको प्राथमिक पहिचान हो । त्यस मान्यताको रापमा बीपीको दृश्यमान मधेस द्वेष क्षणभरमै पग्लेर बग्छ’ पनि लेखेका छन् । यति लेखेपछि फेरि ‘द्वेष’ देख्नुको आधार भेटिँदैन ।
अध्ययन, जेल र प्रवासमा बिताएका वर्षहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत उक्त लेखमा बीपीको मधेस दृष्टिबारे स्वनिर्मित व्याख्यालाई आधार दिन सीके लालले लेखेका छन्, ‘नेपालको संस्कृति एवं समाजबारे बनारस, कलकत्ता एवं दार्जिलिङका प्रवासीहरूसँग सिक्नुपर्ने भयो । ... उनीहरूको अल्पसंख्यकप्रतिको द्वेषभाव (बीपीले) नजानिँदो तवरले ग्रहण गरे ।’ अर्को ठाउँमा लेख्छन्, ‘उनको मधेसबारेको बुझाइ आसेपासेले सुनाएको कुरामा आधारित एवं सतही थियो ।’ यसको पुष्टि हुने कुनै उद्धरणचाहिंँ छैन । सिक्नु नराम्रो होइन । के मधेसबारे बीपीको बुझाइ वा दृष्टिको सीमा उनले खिचेको रेखाभित्र मात्रै सीमित छ त ? उनको मूल्यांकन अनुमानमा सिर्जित देखिन्छ । स्वयं लेखका वाक्यहरू यथार्थपरक कम, विरोधाभासी बढी लाग्छन् ।
कमी–कमजोरी सच्याउने बीपीको तदारुकताबारे उनले ठाउँ–ठाउँमा लेखेको भनाइ सग्लै एक पटक पढौं— ‘सुधारवादी राजनेता भएकाले वस्तुस्थिति बदलिएको चाल पाउनासाथ आफ्नो विचार बदल्न बीपी कत्ति पनि ढिलो गर्दैनथे । दूरदर्शी थिए, त्यसैले आफ्ना कमी–कमजोरीलाई सच्याउने तत्परता बीपीमा अन्य समकक्षी राजनीतिकर्मीहरूमा भन्दा धेरै थियो । उनी तत्कालीन कालचेतनाका प्रतिनिधि पात्र हुँदाहुँदै पनि गल्ती सकभर नदोहोर्‍याउने प्रयोगधर्मी राजनीतिकर्मी निःसन्देह थिए ।’
बीपीको वैचारिक वा कार्यनीतिक तत्परताको यति धेरै बखान गरिसकेपछि पनि विद्वान् लेखक किन उनको मधेस दृष्टिमा खोट देख्ने अनुमान लगाउँछन् ? बीपीको बौद्धिकतामा लेखकले सच्चिने तत्परता देखेका छन् भने, आफ्नो मधेस दृष्टिमा केही कमी–कमजोरी थाहा पाउँदा नै बीपी स्वयंले सच्याएको मान्नुपर्ने कुरा लुकाएका छन् । त्यसरी सच्चिने व्यक्तित्वको मधेसज्ञान आसेपासे र प्रवासीको कानेखुसीमा सीमित भन्ने खालको व्याख्या उनकै भनाइले निराधार लाग्छ ।
सीके लालले अर्कातर्फ लेखेका छन्— ‘...समाज सुधार, साहित्य सिर्जना, संस्कृति निर्माण एवं राजनीतिक परिवर्तनमा उत्तिकै दक्खल भएको पुनर्जागरण व्यक्तित्व (रेनसान्स पर्सनालिटी) भन्न मिल्ने बीपी मरणोपरान्त खस–आर्य जमातका लागि आदर्श स्वरूप (आइडिअल) बन्न पुगेका छन् ।’ बाहुन कुलमा जन्मिनु बीपीको दोष होइन ।
बीपी विचारको उदात्तता त उनै लालले वर्णन गरेकै छन् । अनि बीपीमा लाल स्वयंले देखेको बहुव्यक्तित्वलाई संकुचित पारामा किन जातिवादी आरोपित गर्न उत्साहित वा भ्रमित छन् ? बीपीले गरेको सामाजिक–आर्थिक विभेदविरुद्धको विद्रोह कुनै जाति वा क्षेत्रविशेष मात्रै थिएन । उहाँले फैलाएको चेतना कुनै जाति र क्षेत्रविशेषको बन्धक भयो र ?
सीके लालले केही कारण दिएर बीपी भए अहिलेको कांग्रेस विघटन गरिदिन्थे पनि भनेका छन् । त्यस्तै ‘...बाँचुन्जेल गद्दार घोषणा गरेका पुष्पलाल श्रेष्ठ एकाएक युगद्रष्टाको रूपमा साम्यवादी इष्टदेवतामा पुनःस्थापित भएका छन् ।’ उनको यो भनाइप्रति गर्नेले अलग्गै बहस गर्लान् । उनको पृथ्वीनारायण शाह र भानुभक्त आचार्यबारेको टिप्पणी पनि एकांगी छ । उनको सदाबहार जातिवादी आरोप यहाँ पनि छ । लेखकको शैली अनुरूप नै कर्मको मर्मभन्दा जातलाई अग्राधिकारमा राखिएको छ ।
मधेसको मात्रै होइन, हिमाली र पहाडी जीवनप्रति बीपीको दृष्टिलाई उहाँको राजनीतिक दर्शन र यात्राको मर्मबाट हेर्नुपर्छ । प्रजातान्त्रिक, समाजवादी बीपीको दृष्टि कुनै क्षेत्र र जातिविशेषका लागि फरक–फरक थियो भन्ठान्नु आफैमा दोषपूर्ण हुन्छ । प्रजातन्त्र र समाजवादी दर्शन सबै नेपालीका पक्षमा समान हो भन्ने आफै स्पष्ट हुन्छ ।
मूल दर्शन–दृष्टिबाट पर हटेर व्यावहारिक तर सानो उदाहरणमा लेखकले सरोज कोइरालालाई ठाउँ छोड्ने तराईको यादवलाई किन बीपीले तनहुँ वा कास्कीबाट उम्मेदवार बनाउनुभएन भन्ने खालको प्रश्न गरेका छन्, तर सरोज कोइरालाले राजनीतिक र चेतनाको कर्मथलो तराई मधेसलाई नै बनाएको बिर्सिएका छन् । उदाहरण दिऊँ रामजीवन सिंहको । उनले कर्मथलो दोलखा बनाए । त्यहींबाट नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य र राष्ट्रिय सभा सांसद पनि बने । तराई मधेसका नेपालीले रामजीवनले झैं पहाडको राजनीति गर्न किन गाह्रो मान्छन् ?
बीपीले स्पष्ट शब्दमा ‘पहाडे वा मधेसी भावनाले मुलुकको उन्नति हुँदैन’ (विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, प्रतिनिधि संकलन, प्रधान सम्पादक प्रदीप गिरी) भन्नुले उहाँको मधेस र देश दृष्टिको समग्रता उद्बोध गराउँछ । तराई कि मधेस भन्ने विवाद हालैका वर्षमा निकै भयो, खास गरी संविधान बनाउँदाको आसपास । बीपीको उल्लिखित भनाइमा ‘मधेस’ उहिल्यै प्रयोग भएको छ । यस्तो तथ्यप्रति सीके लालले आँखा चिम्लिदिएका छन् ।
बहुआयामिक विचारका हिसाबले जहिले पनि चर्चायोग्य व्यक्तित्वको अर्को नाम हो— बीपी । सीके लालकै शब्दमा, बीपीको वार्षिकी र १०६ औं जयन्तीबीच बीपीको मधेस दृष्टिबारे उनले बहसको नयाँ विषय सतहमा तानेर राम्रो गरेको चाहिंँ मान्नुपर्छ । भलै त्यो उनी रचित दृष्टि नै किन नहोआस् । क्षणभरमै पग्लिसकेको द्वेषलाई जीवन्त देख्न चाहने कलमलाई साधुवाद ! प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ ०८:५१
भाद्र २४, २०७६ डा. सरोजप्रसाद वझा
आत्महत्या अर्थात् आफैले जानी–जानी गरिने आफ्नो हत्या झट्ट हेर्दा कुनै रोगसँग सम्बन्धित देखिँंदैन, सामाजिक समस्याका कारण यस्तो भएको भन्ने लाग्छ, जुन सत्य होइन । विभिन्न देशमा गरिएका शोध–अनुसन्धान अनुसार, आत्महत्या शारीरिक (जैविक), मानसिक तथा सामाजिक समस्याको सम्मिश्रणका कारण गर्ने गरिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुटीओ) का अनुसार, हरेक चालीस सेकेन्डमा एक व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने गरेको छ । हाम्रो छिमेकी भारतमा मात्रै हरेक दुई मिनेटमा एक जनाको आत्महत्या हुने गरेको छ । यद्यपि नेपालमा आत्महत्याबारे शोध–अनुसन्धान कमै भएको छ, तथापि प्रहरी प्रधान कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकले बताउँछ— हरेक दिन करिब सोह्र जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । वास्तविक तथ्यांक योभन्दा बढी हुन सक्छ ।
डब्लुटीओको सन् २०१६ को तथ्यांक अनुसार, विश्वमा १५–२९ वर्ष उमेरका युवाको मृत्युको दोस्रो कारक आत्महत्या हो । त्यसमाथि विश्वमा हुने आत्महत्याको सबैभन्दा बढी, अर्थात् ७९ प्रतिशत, नेपालजस्ता अल्प र विकासशील देशहरूमा हुने गरेको छ । विश्वभर हरेक वर्ष ८ लाख मान्छेको ज्यान आत्महत्याबाट जाने गरेको छ ।
यसरी हेर्दा आत्महत्या जनस्वास्थ्य सम्बन्धी जटिल समस्या रहेको र यसको रोकथाम ठूलो चुनौती बनेको छ । त्यसैले जनचेतनाका लागि हरेक १० सेप्टेम्बरलाई आत्महत्या रोकथाम दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ । यो वर्षको नारा छ— ‘सबैजना मिलेर आत्महत्या रोकथाम गरौं’ (वर्किङ टुगेदर टु प्रिभेन्ट सुसाइड) ।
नेपालमा आत्महत्यालाई प्रहरीले अपराध अन्तर्गत राख्ने गरेको छ । पश्चिमी मुलुकहरूमा चाहिँ यसलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य रेकर्डमा उल्लेख गरिन्छ । करिब २५ राष्ट्रमा आत्महत्यालाई गैरकानुनी मानिएको छ । २० राष्ट्रमा, इस्लामिक कानुन अनुसार, आत्महत्या प्रयास गर्नेलाई पनि दण्ड–सजाय वा जेल चलान गर्ने गरिन्छ ।
युरोपको कुनै पनि मुलुकमा अचेल आत्महत्या वा आत्महत्या प्रयासलाई अपराध अन्तर्गत उल्लेख गरिँंदैन । यद्यपि १९ औं शताब्दीसम्म अधिकांश युरोपेली मुलुकमा आत्महत्यालाई अपराध मानिन्थ्यो । अस्ट्र्रेलियामा पनि अपराध मानिँदैन । अमेरिकामा गैरकानुनी मानिँदैन, तर आत्महत्या प्रयासलाई केही दण्ड–सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
भारतमा गैरकानुनी मानिएको थियो र आत्महत्या प्रयासबाट बाँंचेकालाई एक वर्ष जेल पठाउने व्यवस्था थियो । तर अप्रिल २०१७ मा भारतीय संसदले मानसिक स्वास्थ्य कानुन पास गरेर आत्महत्यालाई अपराधबाट हटायो । त्यो कानुन जुलाई २०१८ देखि लागू भैसकेको छ ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा देवानी र फौजदारी कानुनमा सबै प्रकारका शंकास्पद आत्महत्याको प्रहरीबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर आत्महत्या वा आत्महत्या प्रयासलाई अपराध मान्ने अथवा दण्ड–सजाय गर्ने प्रावधान देखिंँदैन । नेपालमा आत्महत्या गैरकानुनी नभए पनि जनमानसमा यसबारे गलत बुझाइ छ ।
आफ्नो ज्यान लिने निर्णय गर्न कसैलाई पनि सहज हुन्न । त्यसैले कसैले आत्महत्या किन गर्‍यो भन्ने बुझ्न व्यक्तिविशेषका विभिन्न पक्ष केलाउनु जरुरी हुन्छ, न कि कुनै एउटा सामाजिक पक्ष । व्यक्तिविशेषको शारीरिक स्वास्थ्य तथा वंशानुगत संरचना, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, सामाजिक–धार्मिक र कानुनी समस्या तथा दीर्घकालीन शारीरिक अशक्ततालाई यसमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विभिन्न अध्ययन अनुसार, आत्महत्या गर्नेहरूको मस्तिष्कमा विशेषतः सेरेटोनिन नामक रसायनको कमी रहेको पाइन्छ । तर पनि आत्महत्याको कुनै एउटा मात्र कारक हुन सक्दैन । डिप्रेसन भएका, लागुऔषध प्रयोगकर्ता, अत्यधिक मद्यपान गर्ने (अल्कोहल डिपेन्डेन्ट), व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्याहरू भएका, स्क्रिजोफ्रेनिया भएका, आत्तिने रोग (एंक्जाइटी) भएका व्यक्तिहरूले आत्महत्या गर्ने सम्भावना बढी हुने विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरेका छन् ।
आत्महत्या नेपालसहित विश्वकै जटिल जनस्वास्थ्य समस्या भए पनि यसलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ । नेपालमा सर्वप्रथम आत्महत्या वा आत्महत्या प्रयासलाई अपराधको अवधारणाबाट निकाल्नु पनि अत्यावश्यक छ । अनिमा सरकार र नागरिक समाज दुवै मिलेर आत्महत्याका लागि प्रयोग गरिने कीटनाशक औषधि, मादक पदार्थ लगायतमा निगरानी र अनुगमन गर्नुपर्छ ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्याको उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्यकर्मीलाई यसको पहिचान र रोकथाम सम्बन्धी तालिम, जनमानसदेखि लिएर स्कुल–कलेजमा जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । चौबीसघण्टे टेलिफोन हटलाइन तथा उपचार सेन्टरको सुविधा पनि आत्महत्या रोकथाममा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् ।
लेखक त्रिवि शिक्षण अस्पतालका मनोचिकित्सक हुन् ।
प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ ०८:४२